Ny malaza amin’ny bilaogy Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 5:58 GMT
* Fiarahamonina: Nanjanona tamin'ny toerana iray tao Londra, UK ny fakàna horonantsary ilay tantara nahazo loka ‘Brick Lane’ novokarin'i Monica Ali noho ny fihetsiketsehana nataon'ny vondrom-piarahamonina Bangladeshita eo an-toerana. Niteraka adihevitra be ny sangan'asan'i Monica Ali ary voampanga tamin'ny fitsaratsaram-poana ny Bangladeshita ao UK. Razib Rashedin miresaka momba izany amin'ny antsipirihany.
Drishtipat mitantara betsaka momba ity lohahevitra ity.
* Politika: Drishtipat mitaraina momba ny fiharatsian'ny fahamendrehan’ireo mpanao politika sy ny toetoetry ny politika Bangladeshita.
Tasneem Khalil namoaka lahatsoratra mamiratra manadihady ny fifidianana ho avy ao Bangladesh sy ny fitomboan'ny fondamentalisma Islamika (ny antony sy ny voka-dratsiny).
* Sivana: Rajputro mitatitra fa nakaton'ny minisiteran'ny vaovao ao Bangladesh tampoka ireo fantsona zanabolana malaza telo ambin'ny folo, anisan'izany ny ESPN, Star Sports, Ten Sports, HBO, Zee TV sns. ka niteraka fahatezerana mafy teo amin'ireo mpijery.
* Fivavahana: Sadiq of inspirations and creative thoughts miresaka momba ny toro-lalana nomen'ny soratra avy amin'ny fivavahana isan-karazany mikasika ny valifaty sy ny valisoa.
* Mozika: Kazi Rubayat Imam mampahafantatra ny famoahana ny raki-kira voalohany an'ny tarika rock Bangladeshita, Arbovirus izay efa nandrasana mafy.
Dipu manana ny tantaran'ny tarika rock Bangladeshita.
* Krizy Afovoany Atsinanana: Krishnokoli miresaka izay tompon'andraikitra tamin'ny ady, ankoatra ny hafa.
Mezba mametraka fanontaniana vitsy momba ny famindrana olona.
* Fizahan-tany: Estonian Kristel Kadak nandefa topi-maso vitsivitsy an-tsoratra sy an-tsary momba an'i Bangladesh .
* Tafatafa: Bilaogera Bangladeshita matihanina Razib Ahmed (SouthAsiaBiz.com sy IndianRaj.com) nohadihadian'ny Blog republic. “Tena ilaina ny toe-tsaina tsara amin'ny bilaogy raha te hiavo-tena sy hitombo ianao” hoy i Razib izay nahasarika olona tao anatin'ny volana vitsivitsy.